Madaxweyne Axmed Siilanyo Oo Abaal-marinno Guddoonsiiyey Utartamayaashii Xafidka Qur’aanka Kariimka Ah Ee Kaalmaha Hore Galay+Daawo Sawirada | Berberatoday.com
Madaxweyne Axmed Siilanyo Oo Abaal-marinno Guddoonsiiyey Utartamayaashii Xafidka Qur’aanka Kariimka Ah Ee Kaalmaha Hore Galay+Daawo Sawirada
June 18, 2016 - Written by Berbera Today
Hargeysa(Berberatoday.com)-Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), Madaxweynaha Somaliland ayaa Afur u sameeyay Ardaydii ka qayb-gashay Tartankii Xiftiga Qur’aanka Kariimka ah ee uu Isagu Maal-geliyey.
Sidaana waxa lagu sheegay War-saxaafadeed ka soo baxay Madaxtooyada, kaasi oo u dhignaa sidan, “Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane, Axmed Maxamed Silaanyo ayaa markii labaad sharfay Diinta Islaamka ka dib markuu Afur iyo Casho u sameeyey tartamayaashii Xifdiga Qur’aanka Kariimka ah ee kaalmaha hore ka galay, munaasibad ku qabsoontay qasriga madaxtooyada galabta.
Munaasibad tan ka horaysay ayaa ahayd afur iyo casho sharaf madaxweynuhu u sameeyey afurkii kan ka horeeyey haldoorka culimo awdiinka dalka isla qasriga madaxtooyada Khamiistii.
Tartanka Xifdiga oo la magac baxay tartanka Madaxweynaha ee Qur’aanka kariimka ah ayaa ahaa sannadkii Afraad ee tartankan Madaxweynuhu qabsoomo, isagoo ka soo bilaabmay masjidka dhexe ee Caasimadda ee Cali Mataan, laguna khatimay qasriga madaxtooyada, iyadoo dhinacna laga maamuusayo madaxweynaha loogu magac daray, madaxweynuhu sharfayo qur’aanka kariimka ah, in lagu beratamo barashadiisa.
Sida uu ku warbixiyey sheekh Maxamed Aadan Muxumed, Imaamka iyo (Khadiibka) Masjidka Cali Mataan waxa sannadkan ka qaybgalay tartanka 18 wiil oo ka kala socda gobolada dalka oo dhan, 14 ka mid ah masaajidka ayaa loogu sheegay siday u kala horreeyeen, oo iyaga laftoodu kala sarreeyey, halka afartii ygy sarreeyey, Madaxweynuhuna guddoonsiinayo jaa’isadaha.
Waxa kale oo u yidhi “Madaxweyne, sannadba sannadka ka dambeeya tartanku wuu sii adkaanayaa, dhibcaha lagu kala guulaysanayaana way sii yaraanayaan, taasina waxay tusaale u tahay inuu tartanka qur’aan xifdigu sii caan baxayo marba marka ka dambaysa”.
Erey kale oo laga xiganayo hadalka Sheekh Maxamed Aadan oo ah gudoomiyaha guddida tartanka ayaa ahayd, “shaqadan cidna isuma tusayno, oon ahayn in aan ajar iyo xasanaad kaga doonayno Ilaahay”.
Wuxuu kusoo jaray hadalkiisa waxqabadka madaxweynaha ee dhinaca diinta oo uu sheegay inay ka mid tahay tartankan qur’aan Akhriska, alkumidda hay’adda zakeda, dhismaha masaajidka madaxtooyada iyo kuwa kale.
Wasiirka Madaxtooyada Mudane Maxamuud Xaashi Cabdi oo kulankaa ka hadlay ayaa faah-faahiyey ujeeddada hoggaanka dalku ka leeyahay munaasibadan diiniga ah, waxanu yidhi “Dulucdu ma aha inaynu wada afurno oo kaliya, iyo dhiirigelinta barashada qur’aanka uun, balse way ka xeeldheertahay, waxay daarran tahay oo kale ilaalinta diinta islaamka ee aynu masuulka ka nahay Dawladda masuuliyadeedu ma aha kaliya adeegga bulshada iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha, waxay sidoo kale dawladdu masuulka tahay dhawrista diinta iyo ku camal falkeeda suubban.
Isagoo si gaar ah ula hadlaya da’yartii tartamaysay wuxu yidhi wasiirku “waad ka nasiib badan tihiin da’dayadii, qur’aan xafidsanayaashu way nagu yaraayeen, Hargeysa oo aan dugsiga sare ka galay, nin qudha ayaa xifdiga qur’aanka ah looga dambayn jiray, laguna magacaabi jiray Faysal Cali Faarax, imikana gobolkasta oo aad marto wiil da’yar oo xaafid ah ayaa ku tukinaya, ka dheeraada qabyaalad, tahriib, takfiir iyo afkaar khaldan, ogaada inaan dhammaanteen nahay Ehlu-sunna, Xusuusta waxa dalalka qayrkeen ee islaamka ah ka taagan, iyo cadaawadda iyo dilka ka dhacaya, Wuxu u mahadnaqay, sheikh Maxamed Aadan iyo qaban qaabiyeyaashii tartanka madaxweynaha, wasaaradda Diinta iyo Aw qaafta, warfaafinta iyo wacyigelinta iyo garsooreyaashii tartanka iyo warbaahinta kala duwan ayuu kusoo ururiyey wasiirka Madaxtooyadu”.
Gebegebadii munaasibaddan Madaxweynuhu wuxu abaalmarintii guddoonsiiyey halyeyada xifdiga qur’aanka ee kaalmaha hore ku guulaystay sannadkan.
Mubaarak khaliif Yuusuf oo ku tartamayey magaca Maroodijeex ayaa kaalinta koowaad galay waxaanu keenay 100%, waxaana la siiyey gaadhi NOAH iyo lacagtii shidaalka, waxa u raacay ducada Madaxweynaha.
Ibraahim Maxamuud Axmed oo ku tartamaayey magac Sanaag ayaa kaalinta 2aad galay, wuxuuna keenay 99.6%, waxa la siiyey $1,300 oo doollar, Laptop, iyo Kutub diiniya.
Xanafi Bashiir Muxumed ayaa kaalinta Saddexaad galay, wuxuuna keenay 99.5%, waxa la siiyey $1,000, Mobile iyo Kutub.
Sakariye Cali Muxumed oo ku tartamayey Sool ayaa kaalinta afraad galay, wuxuuna keenay 99%, waxana la siiyey $700 oo doollar iyo Kutub.
Abaal gudka Carruurta hormoodka xifdiga qur’aanka ahayd ka hor, madaxweynaha laftiisa ayaa waxa la gudoonsiiyey hadiyad ahayd kitaab Qur’aan ah oo marna qofku akhrisanaayo, marna isugu is akhriyaya, marka lagu daaro mishiinyar oo rimuudka oo kale ah, kitaabka oo wata, axaadiistii rasuulka iyo cilmi kale oo diineed, waxa gudoonsiiyey Madaxweynaah Ilma yar oo Sheekh Maxamed Aadan Dhalay oo ay garab taagnaayeen aabbihii iyo Wasiirka Diinta iyo Awqaaftu.
Gunaanadkii munaasibadda, Mudane Axmed Maxamed Silaanyo ayaa yidhi “farxad aad iyo aad u weyn ayey ii tahay in aan xafladan ka qaybgalo. Ilaahay waxan ka baryayaa inuu kulligeenba innagu anfaco Qur’aanka Kariimka ah. Ilaahay waxan ka baryayaa inuu wada jir, nabadqab iyo caafimaad qab Inna siiyo, annagoo illaahay uga mahadnaqayna.
Xifdiga Qur’aanka Kariimka ahi waa wax weyn oo muhima, dadkeena, dhallinyarteenna, iyo shacabkeennaba, waan ku dhiirrinaynaa intii awooddeena ah. Dawladdu wax ay kala hadhaysaa ma jirto, waayo dawlad islaama ayeynu nahay. Qaran ahaan waxa loo baahan yahay in aan wax ka tarno oo gacan qabano cid kasta oo wax ka qabanaysa barashada Qur’aanka Kariimka ah iyo kor u qaadka diinta Islaamka. Aad iyo aad ayaan idinku mahad naqayaa, Wa salaamu calaykum, wa-raxmatullaahi wa-barakaatu”.